सिक्किमिकरणको नयाँ अवतार हो मोदीकरण ! | सिमान्तMarginal सिक्किमिकरणको नयाँ अवतार हो मोदीकरण ! – सिमान्तMarginal
सिक्किमिकरणको नयाँ अवतार हो मोदीकरण !
Posted on6Dec 20145Dec 2014 by Jesi | INCOMESCO
जगदीश वाग्ले @ सिमान्त,
अर्काको अधिनमा रहेका वस्तु धम्क्याएर वा चोरेर वा फकाएर प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपालसँग जलश्रोत लगायत अपार प्राकृतिक श्रोतहरूको खानी छन । त्यस बाहेक राजनैतिक, सामरिक र आर्थिक बिषेशताहरू पनि छन । त्यसलाई प्राप्त गर्ने वा आफ्नो अनुकुल बनाउने छिमेकीहरूको चाहना हो, जुन स्वभाबिक पनि छ । हिजोका दिनहरुमा धम्क्याएर र चोरेर प्राप्त गर्ने अभिष्ट राखेको भनिने रणनितीलाई भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले फकाउने निती का रुपमा लिन खोज्दैछन । नेपाललाई धम्किन त गाह्रो थियो तर अब, के फकिन सजिलो छ त !
भारतीय विश्लेषक अनन्द स्वरुप वर्माको लेख कान्तिपुरमा पढदा भारतमा सुधारका लागि ”बिश्वास”को वतावरण बन्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ भने नेपाल तर्फका लागि सिक्किमिकरणकै नयाँ अवतार हो- मोदीकरण । बर्माकै शब्दमा ”सबैजसो पार्टीहरूमा उसले (भारत) लेन्डुपहरूको जमात नै पाइसकेको छ । अब आवश्यकता शक्तिको होइन, कहिले उपदेश दिएर त कहिले आदेश दिँदै, कहिले मुसुक्क हाँसेर त कहिले आँखा कर्के पारेर उसले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सक्छ, जसका लागि अब हातहतियार या सैनिकहरू नै चाहिँदैनन् । यही नै हो, नयाँ अवतारसहितको ‘सिक्किमीकरण’, जसलाई तपाई सुविधाका लागि ‘मोदीकरण’ भन्न सक्नुहुन्छ ।” मोदीले यतिखेर दिएको सन्देश यहि हो । यसका अगाडी सानो नेपाललाई उग्रपन्थी, बामपन्थीहरूको अतिक्रमणबाट प्रजातन्त्र जोगाउँदै संविधान बनाउनै धौ धौ परिरहेको छ । प्रष्टसँग बर्माले उठाएको डरलाग्दो संकेत के हो भने- आज ठुला र शक्तिशाली मुलुकका अगाडी साना र गरिव मुलुकहरू सिक्किमभन्दा निरिह अवस्थामा छन । यो क्रम रोकिनेवाला छैन । स्वरुप मात्रै बदलिएको हो । ”सबैजसो पार्टीहरूमा लेण्डुपहरू’’ पालेको भारतले आँखा झिम्क्याएको भरमै आफ्नो काम गराउन सक्छ । तर बर्माहरूले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने जसरी भारतवासीका लागि भारत महान छ नेपालीका लागि सानै सहि नेपाल पनि त्यतिनै महान हुन्छ ।
अब आवश्यकता शक्तिको होइन, कहिले उपदेश दिएर त कहिले आदेश दिँदै, कहिले मुसुक्क हाँसेर त कहिले आँखा कर्के पारेर उसले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सक्छ, जसका लागि अब हातहतियार या सैनिकहरू नै चाहिँदैनन् । यही नै हो, नयाँ अवतारसहितको ‘सिक्किमीकरण’, जसलाई तपाई सुविधाका लागि ‘मोदीकरण’ भन्न सक्नुहुन्छ ।”
श्वभरी छरिएर रहेका भारतीय बुध्दिजिवी र धनाड्यहरू अबका दिनहरुमा आफ्नो भूमिका भारतमै खोजी रहेका छन, त्यसकालागि उदार नेत्रित्वदायी भारतिय भूमिकाको पक्षमा जनमत बन्नु स्वभाविक हो । यिनै कुराहरूको प्रतिविम्व ‘मोदिकरण’ हुन सक्छ । आबेनोमिक्स (जापनका प्रधनमन्त्रीको आर्थिक नितिको बिषेशण शब्द ) झैँ मोदिकरण छिट्टै नसेलावोस । पहिलो कार्यकालमा त भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंह पनि चर्चाको सिखरमै थिए, दोश्रो कार्यकालमा ओरालो लागेका हुन ।
नेपालले मोदीका अगाडी यो प्रमाणित गर्न सकोस कि – नेपालका राम्रा योजनाहरू हिजोको भारतीय नितिकै कारण अलपत्रमा परेका हुन । विगतमा बिग्रे-भत्केका कुराहरू तर्फ कहिले दरवारलाई त कहिले भारतलाई दोष थोपारेर पाखण्ड गर्दै थियो नेपाली राजनीति तर अबको परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको लक्ष्य भनेको बर्माकै शब्दमा ”नेपाललाई पुन: हिन्दू राष्ट्र बनाउने” मात्रै हो त ! नेपाल कहिले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र त कहिले हिन्दू त कहिले धर्म निरपेक्ष्य भन्दै अन्तर्द्वन्दमा अल्झेको छ । सम्बिधानमा लेखेपनि नलेखेपनि महान क्रान्तिकारीदेखि जनजातिहरू आफ्नो परम्परा हिन्दू संस्कारबाटै गर्दैछन । यिनीहरूले त आफ्नो घरमा आगो सल्काएर पाखण्डको राप लिएका मात्रै हुन । एउटा कुरा के निश्चित हो भने नेपाल पुन: हिन्दुराज्य घोषणा भयो भने पश्चिमाहरूलाई यस क्षेत्रमा आफ्नो अधिन देखाउन मोदीलाई राम्रो अवसर प्राप्त हुनेछ र भारतीय हिन्दू मतदताहरुलाई हिन्दुत्वको पक्षमा सन्देश दिने अवसर पनि मिल्नेछ । नेपाल नितिका कारणबाट पनि मोदीको सिक्किमिकरण यसरी मोदिकरणमा बदलिँदैछ ।
यो भनेको न रुसले हालै आफुमा गाभेको ‘क्राइमिया’करण हो न त अधिकार नपुगेर स्पेनसँग हालै टुक्रिएको क्याटालोनिया कै अवस्था हो । जे हो त्यो शक्ति विस्तारको अर्को रुप हो।
गत महिना म्यानमारमा भएको भेटमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘म्यान अफ एक्सन‘ को उपमा दिँदै मोदीले आफूलाई प्रभावित पारेको बताए र ओबामाले मोदीको प्रयासले ठोस नतिजा दिन समय लाग्ने भन्न पनि भ्याए । निस्चित रुपमा मोदी एतिखेर केही गरि रहेका छन भने त्यो हो आन्तरिक र बाह्य रुपमा आफ्नो उपस्थिती र शक्तिलाई स्विकार्न लगाउनु । हिजोसम्म आगोपानी बाराबारको अवस्थामा रहेका नरेन्द्र मोदी अमेरिकाका लागि आज एकाएक ‘म्यान अफ एक्सन’ भएका छन ।
आज असमानता बढेको र यसले प्रजातन्त्र सिध्याउन सक्नेदेखि पुँजिवाद सिध्दिन सक्नेसम्मका खतराबारे बिद्वानहरूको अभिमत प्रसस्तै भेटिन्छन । संकेतहरूले के निस्चित गर्दैछन भने समाज चरम बिभाजित हुँदैछ । थोरै धनीहरु र धेरै गरिवहरुका बीचमा अन्तर् संघर्ष बढदो छ । ग्लोबलाइजेशनका हिमायती अमेरिका लगायत धनी राष्ट्रहरू धनिहरुकै प्रतिनिधि भएर रहनेछन । किनभने उनीहरूको आम्दानी र जिवनस्तर घटाउन त्यहाँको जनता मान्दैन । त्यसैले धनीहरूले आफ्नो आवस्यकता पुरा गर्न चारैतिरको श्रोतलाई अधिनमा राख्नु पर्ने हुन्छ । आतंकको नाममा भैरहेको पानी र तेलको राजनीतिले अहिले त्यहि कुराको प्रमाण दीइरहेका छन । मोदीको उदयसंगै भारतले पनि यसै पद चिन्हलाई समात्नेछ ।
मोदी धम्क्याएर वा चोरेर केही लिने भन्दा फकाएर प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा सतर्क देखिएका छन । असल नेत्रित्वको खुबी पनि यहि हो । कम से कम नेपालले आफ्नो आवस्यकता र योजना प्रष्ट पार्न सक्यो र त्यसलाई धम्किमा नपरिकन उठाउन सक्यो भने अहिलेका लागि त्यहिनै ठुलो कुरा हुने थियो । एकजना व्यक्तिको आगमन र परागमनले यतिधेरै सुधारको संकेत गर्न सक्छ भन्ने कुरा नेपालका नेता-जनता सबैले मोदीलाई हेरेर सिक्नु पर्छ । नेपालले पनि मोदीका अगाडी हिजोका राम्रा योजनाहरू भारतीय नितिकै कारण अलपत्रमा परेका हुन भनेर प्रमाणित गर्न सक्नु पर्ने चुनौती आएकोछ ।
ओबामाले गरे मोदीको प्रसंशा
Posted in भारतTagged Nepal-IndiaLeaveacomment
Previous Postनेपालको प्राकृतिक श्रोत र अखण्डता : मोदी नीति !Next Post‘बरु मलाइ पनि मारिदेउ’